Raacayso tareen In Budapest: 10 Waxyaabaha aad u baahantahay inaad ogaato | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Raacayso tareen In Budapest: 10 Waxyaabaha aad u baahantahay inaad ogaato
Budapest dhab ahaan waa xarun ee Hungary. Waa dhibic dhexe marka ay timaado inay ku socdaalaan tareenka ee Budapest, waxaa jira tareen badan joojiyo. Iyadoo Travel by tareenka ee Budapest iyo guud ahaan waa xiiso leh iyo inta badan aragnimo cusub oo loogu talagalay dadka badan, waxay kaloo noqon kartaa yara dareemayaasha sugeyso waqtiyada, gaar ahaan magaalo cusub oo ajnabi ah. maskaxdaada ku dejiyaan oo eegno ah 10 waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan safarka tareenka ee Budapest.
Waxaa jira saddex saldhigyada tareenka ugu weyn oo aad ku Socda karo by tareenka ee Budapest iyo waxay yihiin:
bari: Waxay ku taallaa ee Bariga. Tani waa saldhigga ugu weyn ee caalamiga ah iyo Intercity tareenka ee Budapest.
galbeed: Waxay ku taallaa in West ah.
Deli: Waxay ku taallaa ee Koonfurta
safarka: Wareejinta Airport
Tareen isteeshanka ugu dhow in ay Budapest Airport Terminal 2 waa Ferihegy, tareenada ka hawlgala iyo saldhigga Nguyati ee Budapest.
La dhoofidda shandadaha
Haddii aad u safrayso magaalada kasta oo ku wareegsan boorsooyinka dhabarka, shandadaha ama wax kale boorsooyinka gacanta hubi inaad ku kaydiso this dabaqa kuugu jirto lugaha dhexdooda halka safraya tareenada si ay u noqon on the dhinaca ammaan.
Ammaanka for Haweenay
Haweenka dareemi kartaa istareexsan markii u safraya tareen agagaarka Budapest. bartamaha magaalada waa arrin ammaan ah magaalo weyn oo ilaa iyo inta safarka ah isticmaalaan dareen caadi ah oo aadan qaadan halista loo baahnayn kaliya sababtoo ah waxay fasax ka dibna ay xasilli karto sugan in waxyeello ku dhicin doonaa inay.
Ka fogaanshada Pickpocketing
Dalxiisayaal badan tahay si aad u hesho qaado-Laqaatay in buuxo meelaha gaadiidka dadweynaha sida saldhigyada tareenka, halkaas oo xatooyo kale yaryar laga yaabaa inuu dhaco. Inkasta oo aanay tani waa sababta a of visitors waaweyn walaac waxaa lagula talinayaa in ay ogaadaan iyo soojeedaan.
Helitaanka Qiyaastii – Raacayso tareen ee Budapest
Waxaa jira tiro ka mid ah khadadka tareenka kala duwan ee Budapest iyo foomamka safarka tareenka qayb weyn oo ka mid ah gaadiidka dadweynaha taas oo macnaheedu yahay waxaad ka heli kartaa oo kaliya ku saabsan meel kasta oo tareen. In la hubiyo in si loo hubiyo wakhtiyada iyo khadadka kala duwan oo aad u baahan doontaa in aad qaadato si aad u hesho si aad u socoto. Waxaad ka heli kartaa tan macluumaadka safarka ee khadka tooska ah ama xarunta tareenka. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in tikidhada at saldhigyada.
Marka aad ku jirtay Budapest maalin ama laba iyo heshay saa'idka aad, hubi inaad u hesho Kaarka Budapest a. card waxay bixisaa dhowr ah oo dheeraad ah sida lacag la'aan ah ku soo galeen qaar ka mid ah matxafyada, free baska/tareen / taraamka safarka biyaha /, iyo safar biyaha.
Safarka by tareenka ee Saffarada Day Budapest
Waxaa jira tiro ka mid ah safarada maalin fantastic in ay qaataan oo ay samaynayaan Travel by tareenka ee Budapest. Waxay kuu qaadan doonaa qaar ka mid ah meelaha cajiib ah oo aad tusi muuqaal cajiib ah jidka. U hubso in aad sameyso cilmi-hor intaadan. Hubi in aad hesho wax badan oo ka mid waqti aad ka dagantahay magaalada this.
Budapest uu leeyahay qaar ka mid ah oldest iyo inta badan tareenada qurux badan ee Hungary. Hubi inaad booqato Eastern Railway Station ah (bari Railway Station) iyo Tareenka Station Galbeed (galbeed Railway Station) oo waa in aad ka heli iyagii u soo guuri tareenka ee Budapest, inta aad halkaas joogtid oo ay qaataan taariikhda iyo naqshadaha cajiib ah in Budapest leeyahay in ay bixiyaan.
The History of Lines Tareenka ee
line M1 ee Budapest waa labaad ee ugu da'da weyn tareenka dhulka hoostiisa line in dunida. Waxa uu ahaa howlgal tan 1894 oo waxaa xataa ku qoran sida a UNESCO World Heritage Site. Waxaa sidaas waa taariikhda badan magaaladan iyo tareenada ayaa la isticmaalayay iyo weligiis iyo weli ordaan si hufan.
Budapest run ahaantii waxa oo dhan waxay leeyihiin oo waa a dalxiis loo jecel yahay caga. Waa maxay sababta ma noqon sida dadka deegaanka iyo isticmaalka tareenada ka dhigi doontaa sida nooc ka mid ah gaadiidka dadweynaha? ma ceeboobi doono in aad!
Tayaasha A Tareen Ticket in safarka Yurub? Waa maxay sababta aan qaadan 3 daqiiqo on our site in la helo tikidhada jaban ee dariiqyada aad. Soo gal in our Save the website A tareenka hadda. Tigidhada la bixin karaa siyaabo kala duwan, wax walba oo aad waayo-aragnimo ka dhigi doonaa sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-things-know-travel-by-train-in-budapest%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#bucapest #traveleurope tareen safarka traveltips